8 Pashure paizvozvo Mwari akayeuka+ Noa nemhuka dzose dzomusango nezvipfuwo zvose zvaaiva nazvo muareka,+ Mwari akaita kuti mhepo ipfuure nepanyika, mvura ikatanga kuserera.+ 2 Zvitubu zvemvura yakadzika+ nemagedhi emvura+ okumatenga zvakavharwa, naizvozvo mvura zhinji yaibva kumatenga yakamiswa. 3 Mvura yacho yakatanga kuserera panyika, ikaramba ichiserera; uye pakapera mazuva zana nemakumi mashanu, mvura yacho yakanga yadzikira.+ 4 Mumwedzi wechinomwe, pazuva rechigumi nemanomwe romwedzi wacho, areka+ yakagara pamusoro pemakomo eArarati.+ 5 Mvura yakaramba ichingoserera kusvikira pamwedzi wechigumi. Mumwedzi wechigumi, pazuva rokutanga romwedzi wacho, misoro yemakomo yakaoneka.+ 6 Naizvozvo mazuva makumi mana apera, Noa akavhura hwindo+ reareka raakanga agadzira. 7 Pashure paizvozvo akabudisa gunguo,+ rikaramba richibhururuka kunze, richienda uye richidzoka, kusvikira mvura yaoma panyika. 8 Gare gare akabudisa njiva+ ichibva kwaari kuti aone kana mvura yakanga yaserera panyika. 9 Asi njiva haina kuwana nzvimbo ipi neipi yokuti imhare norutsoka rwayo, naizvozvo yakadzoka muareka maaiva nokuti mvura yakanga ichiripo panyika pose.+ Akabudisa ruoko rwake, akaitora, akaipinza muareka maaiva. 10 Akamirirazve mamwe mazuva manomwe, akabudisazve njiva yacho muareka. 11 Gare gare njiva yacho yakauya kwaari panenge panguva yemanheru uye tarira! yaiva neshizha romuorivhi+ mumuromo mayo rakanga richangobva kutanhwa, naizvozvo Noa akaziva kuti mvura yakanga yaserera panyika.+ 12 Akamirirazve mamwe mazuva manomwe, akabva abudisa njiva yacho, asi haina kuzombodzokazve kwaari.+ 13 Zvino mugore remazana matanhatu nerimwe,+ mumwedzi wokutanga, pazuva rokutanga romwedzi wacho, mvura yakanga yaoma panyika; Noa akabvisa denga reareka akatarira, uye onei panyika pakanga paoma.+ 14 Mumwedzi wechipiri, pazuva rechimakumi maviri nemanomwe romwedzi wacho, nyika yakanga yaoma.+ 15 Zvino Mwari akataura naNoa achiti: 16 “Buda muareka, iwe nomudzimai wako nevanakomana vako nemadzimai evanakomana vako vauinavo.+ 17 Zvisikwa zvose zvipenyu zvauinazvo zvenyama yemarudzi ose,+ zvisikwa zvinobhururuka+ nemhuka+ nezvinhu zvose zvinofamba zvakawanda panyika,+ buda nazvo, kuti zviwande panyika, zvibereke zvive zvizhinji panyika.”+ 18 Noa akabuda nevanakomana vake+ nomudzimai wake nemadzimai evanakomana vake vaaiva navo. 19 Zvisikwa zvose zvipenyu, zvose zvinokambaira nezvisikwa zvose zvinobhururuka, zvose zvinofamba panyika, maererano nemarudzi azvo zvakabuda muareka.+ 20 Noa akatanga kuvakira Jehovha atari,+ akatora dzimwe pamhuka dzose dzakachena+ nezvisikwa zvose zvinobhururuka zvakachena,+ akapisira zvinopiwa zvinopiswa paatari yacho.+ 21 Zvino Jehovha akanzwa kunhuhwirira kwakanaka,+ naizvozvo Jehovha akati mumwoyo make:+ “Handichazotukizve nyika+ nemhosva yomunhu, nokuti zvinodiwa+ nomwoyo womunhu zvakaipa kubvira achiri muduku;+ uye handichazoparadzizve zvinhu zvose zvipenyu sezvandakaita.+ 22 Nokuti mazuva ose ayo nyika inoramba iripo, kudyara mbeu nokukohwa, kutonhora nokupisa, zhizha nechando, uye masikati nousiku, hazvizombomiri.”+